Ugu Weyn Ee Fusarium
Azalea (Latin Azalea) waa dhir aad u qurux badan oo ka soo jeeda Rhodeodendron oo ka tirsan qoyska Heather. Ubaxwaxay jecel yihiin iskudhacyadii badnaa, geedka jilicsan ee cagaarka cagaaran. Si kastaba ha ahaatee, azalea ayaa sidoo kale ka xanaajin kara milkiilayaasheeda, inay soo gaadhsiiyaan tiro badan oo cuduro ah iyo cayayaan cayayaanka.
Sida loo kobciyo caqligu waa meeshan
Qodobka aasaasiga ah ee ubaxa waxaa lagu sharaxay sharaxaad sida gabbaldayaha ama chamomile yar. Warshadaan dilka ah ayaa u dulqaadanaysa la'aanta qoyaan waxayna ku jiri doontaa ilaa uu baraf ugu horeysay. Coreopsis waxay ku taallaa kulaylaha Afrika, North America iyo Hawaii. Geedku wuxuu koraa ilaa 1 m dhererka. Ubax qurxoon oo dhexroorka koraya ilaa 10 cm.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Fusarium 2020